XOG: Is-xulufeysa Ka Dhex-bilowday Xidigaha PSG, 5 Dhinac Ayey U Kala Jabeen & Sababta Oo La Ogaaday » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Falanqeynta/XOG: Is-xulufeysa Ka Dhex-bilowday Xidigaha PSG, 5 Dhinac Ayey U Kala Jabeen & Sababta Oo La Ogaaday
Tan iyo markii uu Neymar JR kusoo biiray kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain, waxaa kooxda ka dhex-bilowday is-xulufeysa aanan horey ujirin, sida laga soo xigtay warbixin cusub, taasoo uu dhawaan daabacay Wargeyska Globoesporte.
Sanad ciyaareedkii hore ayay ahayd kadib markii Neymar uu Barcelona uga soo biiray PSG, markaasoo lagu soo iibsaday aduun lacageed dhan 222 Milyan, taasoo ka dhigtay ciyaaryahanka dunida ugu qaalisan, laakiin hada waa dhaawac.
Imaan-shiyaha Neymar ayaa sababay in kooxda PSG ay ka sameys-maan 5 koox kuwaasoo ay ku midoobeen ciyaaryahano, kuwaasoo iyaga ka fikrad ka duwan kuwa kale, islamarkaana kula dagaalamaya ama kula loolamaya kalsoonida macalinka iyo safashadiisa.
Neymar ayaa wuxuu sameystay koox ay kula mideysan yihiin Dani Alves, Thiago Silva iyo Marquinhos, waxayna kuwada hadlaan marka la joogo xarunta kooxda Luqadooda, taasoo keentay in ciyaartoyda qaar ay ka qaadeen Shaki weyn.
Afartooda ayaa waxay yihiin kuwa awood badan ku leh kooxda, waxayna go’doomiyeen dhamaan ciyaartoyda kale – Tusaale ahaan xafadladii dhalashada ee Neymar ma aysan soo xaadiri qaar kamid ciyaartoyda PSG xitaa macalinka ma uusan imaan.
Xubinta Shanaad oo ah Goolhaye kooxda kubada cagta PSG ee Kevin Trapp, kaasoo xiriir fiican la leh gabadha reer Brazil ee Izabel Goulart, ayaa waxay ka saaciday inuu ku dhawaado xidigahaan kasoo jeeda qaarada Koonfurta Ameerika.
Dharigaan waxaa ku jira ciyaartoyda kasoo jeeda Qaarada Larin Ameerika, islamarkaana uu hogaamiye uyahay weerar yahanka lagu magacaabo Edinson Cavani, waxaana kaloo ku jira laacibiinta kala ah: Angel Di Maria, Javier Pastore and Giovani Lo Celso.
Cavani iyo xirtiisa waxay mar walba ay kasoo horjeedaan kuwa uu liijaabka uhayo PSG, waxayna mar walba qaataan talaabooyin ka hor imaanaya ama Fikrado kasoo horjeeda kuwa kale, waana kuwa uu udhaxeeyo dagaalka ugu badan.
Xirta Cavani ayaa waxay yihiin kuwa aanan mar walba noqon dookha koowaad ee macalin Unai Emery, waxaana ugu waa weyn Di Maria oo keyd-ley ah iyo waliba Javier Pastore and Giovani Lo Celso, inkastoo ay xidigo fiic-fiican ay yihiin.
Xidigaha PSG kala bar waa kuwa reer France ah, taasoo ka dhigan in 25-kii 13 kamid ah ay yihiin Faransiis, waxayna iyaguna ay yihiin Koox gaar ah oo ay ku mideysan yihiin.
Ciyaartoyda kala ah Kylian Mbappe, Adrien Rabiot, Alphonse Areola, aLayvin Kurzawa, Presnel Kimpembe iyo Lassana Diarra, oo dhamaantooda suuqii Janaayo kimid kooxda ayaa waxay yihiin kuwa ku jira Dharigaan.
Waxay iyaguna ay kuwada hadleen kaliya luqada Faransiiska, waxayna kooxda ku leeyihiin awood gooni ah, mararka qaarkood ciyaartoyda kale ayay gacan-bixiyeeyaan.
Dharigaan waxaa ku jira ciyaaryahano, kuwaasoo aanan wax lug ah aan ku lahayn is-xiira iyo guuxa socda, waana kuwa dhax-dhaxaad ah.
Labo ciyaaryahan ayaa halkaan isku baystay, waana kuwa lagu kala magacaabo Thiago Motta iyo Julian Draxler oo Jarmalka iyo Talyaaniga kasoo wada jeeda.
CIyaartoydaan mararka qaar oo ay xiisadu kacsan tahay inay isku dayaan inay dejiyaan, waana kuwa mar walba xalka keena marka uu khilaaf dhaco.
Halkaan waxaa jira hal ciyaaryahan, kaasoo ah Marco Varrati, waana mid aanan sidoo kale khilaafka ku lug lahayn, laakiin wuxuu saaxib la yahay qof walba oo kooxda jooga.
Wuxuu yaqaa luqadaha kala ah: Faransiiska, Brazil, Portugal, Talyaaniga iyo Spian, taasoo usahleysa inuu la hadlo ciyaaryahan walba oo kooxda jooga.
Sikastaba, Varrati waa mid qiimayn sare ku leh kooxda, islamarkaana aad looga tix-geliyo, wuxuuna mar walba helaa booskiisa koowaad ama dookhiisa koowaad, wuxuuna talo ama cod uu ku leeyihiin marka ay soo kordhaan arrimaha waa weyn.